चितवनको उत्पादन विदेशमा लोकप्रिय बन्दै
चितवन, २१ चैत । चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नं १२ मा स्थापित माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरीले उत्पादन गर्दै आएको आफ्नो उत्पादन एभरेष्ट बियरको निर्यात क्षेत्रमा विस्तार गर्ने भएको छ । सो कम्पनीले हाल जापान, बेल्जियम र अष्ट्रेलिया बियर पठाउँदै आएको छ । कम्पनीका प्रमुख प्रबन्धक शान्त श्रेष्ठले कोरिया, सिङ्गापुर र अमेरिकामा बियर पठाउनको लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
कम्पनीको एभरेष्ट प्रिमियम बियर हाल विदेश पठाइँदै आएको छ भने अमेरिकामा एभरेष्टको ट्रेड दर्ता भइसकेको छ । कोरिया र अष्ट्रेलियामा पनि दर्ताको प्रक्रिया भइरहेको श्रेष्ठले बताए । जापानमा ब्रुअरीले १२ वर्षयता एभरेष्ट बियर पठाउँदै आएको छ । वार्षिक चार कन्टेनर बियर जापान जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । तीन वर्षअघिबाट बेल्जियम र दुई वर्षअघिबाट अष्ट्रेलिया बियर पठाइँदै आएको छ ।
बु्रअरीको वार्षिकरूपमा पाँच कन्टेनर बेल्जियम र तीन कन्टेनर अष्ट्रेलिया जाने गरेको श्रेष्ठले बताए ।सात वर्षअघि चीन जाने गरेको भए पनि त्यहाँको बजार बढी प्रतिस्पर्धी भएपछि धान्न नसक्दा हाल रोकिएको छ । हाल निर्यात भइरहेका देशमा खपत बढाउने र नयाँ देशमा निर्यात शुरु गर्ने योजनामा कम्पनी रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाम रहेको बियर भएकाले विदेशीले विशेष रुचि राखेको श्रेष्ठले बताए ।
कतिपयले बियर पिएपछि स्टिकर निकालेर राख्ने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले निर्यात गर्दा राजश्वमा छुट दिने गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शुवप्रसाद रिजालका अनुसार बियर निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था रहेको छ । रिजालका अनुसार नेपाली बजारमा समेत बिक्री गर्ने यस ब्रुअरीले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म रु एक अर्ब १० करोड १६ लाख २७ हजार अन्तःशुल्क बुझाइसकेको छ ।
माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरीले एभरेष्ट प्रिमियमसँगै गोल्डेन टाइगर स्ट्रङ, राइनो प्रिमियम र राइनो स्ट्रङ बियर उत्पादन गर्दै आएको छ । विसं २०४२ मा अमात्य परिवारले शुरु गरेको यस कम्पनीको पहिलो बियर सानमिगलको ब्राण्ड खोसिएपछि करीब बन्दको अवस्थामा पुगेकोमा ब्राण्ड थप गरी निर्यातसमेत गर्न थालेपछि बजार विस्तार गर्न सकेको श्रेष्ठले बताए। कम्पनीमा हाल २२५ ले रोजगारी पाएका छन् ।
सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो आजको भाउ
बिदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको बिनिमयदर